Maxaa ka jira in sharciyada Baarlamaanka qaar lagu diyaariyo Xalane? | Keydmedia
Maxaa ka jira in sharciyada Baarlamaanka qaar lagu diyaariyo Xalane?
Arintaan ayaa banaanka keeni karto in hay'adaha reer galbeedka ee degan xerada Xalane ay fara gelin toos ah ku hayaan howlaha Baarlamaanka Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya – Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalinimadii shalay aheyd akhrinta koowaad marsiiyay Hindise Sharicyeedka dib-u-eegista Sharciga la dagaalanka Burcad-badeeda iyo ka hortaga af duubka sharci LR.36 ee soo baxay 30-ka bishii April sanadkii 1975-ki.
Xildhibaanadaan ayaa sharcigaan dood dheer ka yeeshay, iyagoo sheegay in sharcigaan uu muhiim yahay, maadaama ay jiraan Maraakiib si sharci darro ah Badda ka kaluumeysto iyo kooxaha Burcad-badeedda oo caqabad kale ah.
Xildhibaan Cabdi Cali oo ka mid ah mudanayaasha Baarlamaanka oo doodad ka hadlayay ayaa sheegay in sharcigaan laga soo qoray Xerada AMISOM ee Xalane, islamarkaana qeexidda sharcigaan ay intaas ka dheertahay, wasiirkana uu la laabto.
Sidoo kale, Xildhibaanka waxuu sheegay in sharcigaan uu tilmaamayo in dhalinyarada Soomaaliyeed kaliya Burcad-badeed yihiin, taasina Hay’aidhii soo qoray ku baneysanayaan in ay shaqo la’aan dhigaan dhalinyarada Badda ka kaluumeysta.
Waxuu sheegay in Xeebta Liido lagu arkayo jay badan oo badda soo tuftay, kaasoo sheegay in la soo bur-buriyay Jamaladii Badda uu kaluunka iyo Aargoostada ku hoos noolaayeen, iyadoo la adeegsanayo qaraxyo siduu hadalka u dhigay.
Xildhibaanka ayaa sidoo kale sheegay in Badda Soomaaliya hadii sharci loo sameynayo uu ka madax banaanadaano hay’ado dano gaar ah wata, siduu hadalka u dhigay, isagoo intaa ku daray in Baarlamaanka arintaan fiiro gaar ah ka yeesho.
Xeebaha Badda Soomaaliya waxaa ku sugan Ciidamo ka kala socod Midowga Yurub iyo Atlantic, kuwaasoo sheegto in ay biyaha Soomaaliya ka ilaaliyaan Burcad Badeedda, hase yeeshee ay dad badan aaminsanyihiin ay kaluumeysi sharci darro ah sameeyaan, islamarkaana xaaluf badan kawadaan.
0 Comments Topics: farmaajo kheyre mursal